Inkqubo yokuThuthwa kweFektri iyonke, umatshini omnye wokuLaminetha uMatshini-i-GOJON
Ingcali, Ubukrelekrele, Udidi oluPhakamileyo
I-GOJON ibekwe kwisixeko saseQingdao, e-China, inikezela ekuphuhliseni iimveliso eziphambili ezinje ngenkqubo yokuhambisa umzi-mveliso, ulungelelwaniso olulodwa lweLayini yokuLaminetha, inkqubo yoLawulo lweMveliso etc. Ngomgangatho obalaseleyo weemveliso, uthungelwano olugqibeleleyo lokuthengisa kunye nenkonzo ebalaseleyo, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe amaninzi afana neJamani, i-Itali, iSpain, iGrisi, iRashiya, iBelarus Japan, iThailand neIndiya njl.njl.
Amava eminyaka eli-13
Iimveliso ezingaphezu kwama-20
Ngaphezulu kwezigidi ezi-2
I-LS Series emgceni ngesantya esiphezulu se-laminator kunye ne-stacker
Ukucaciswa kobuchwephesha -Iphepha eliphezulu kunye nephepha elingaphantsi lokunqumla; -Amaphepha aphezulu ngokuzenzekelayo-amashiti asezantsi ahlolisisa-alungelelanisa inkqubo elawulwa nge-servo (enelungelo elilodwa lomenzi); - Amabhanti okutsala inkunkuma kwinkqubo yonke yokuhamba; Ivalvu yokuhambisa efanayo; -Ukuphakamisa iqonga lesixhobo sangaphambi kokondla; - Isakhelo sokubamba imisebenzi emininzi yamaphepha eebhodi ezahlukeneyo; - Inkqubo yokuphinda isetyenziswe kwakhona; -Ukujikwa kabini kwerejista esecaleni; -Ikukhethwa ngokuzenzekelayo / ngesandla kwibhodi yephepha ...
Isantya esiphezulu seLaminator ezenzekelayo
Isici 1. Ukuphambuka kwephepha okuphezulu kunokulungiswa yinkqubo yeservo ephindwe kabini, ukubonelela ngokuchaneka okuphezulu, kunye nobukhulu obugqithisileyo bunokulawulwa ngokuzenzekelayo. 2. Amashiti aphezulu kunye namashiti asezantsi ahambelana nerejista yangaphambili ngexesha lokuhamba, le nkqubo ingapheliyo ibonelela ngemveliso ephezulu. 3. Ubume boomatshini buqinisekisa iphepha elingaphezulu kunye nephepha elisezantsi lokuhambisa uhambiso. 4. Isantya esiphakamileyo sentloko esondlayo sinika intsebenzo ezinzileyo nethembekileyo. 5. ...
Ifolda yeGluer ngokuzenzekelayo 1226
Ukucaciswa 1. Isantya sebhanti yokuhambisa (m / min): 120 2. ukusebenza ngokukuko (amaphepha / imin): 240 (kuxhomekeke kwimeko eyiyo) Ubungakanani (L × W × H) (mm): 12640 × 4250 × 3000 (ungabandakanyi icandelo elibophelelayo) Imowudi yolawulo: PLC ulawulo oluzenzekelayo olucwangcisiweyo 8.ubungakanani obungenanto: Ubukhulu. Ubungakanani (mm): 1200 × 2600, min. ubungakanani (mm): 260 × 740; Ma ...
Ifolda yeGluer 1228-S ngokuzenzekelayo
Ukucaciswa kobuchwephesha- ulwakhiwo oludibeneyo, iyunithi nganye inokusebenza ngokuzimeleyo, inokuqhagamshelwa kumatshini wokuprinta ojikeleze i-roller yi-1000mm ~ 1200mm; -Ukukhetha ngokukhawuleza kunye nokutshintsha iodolo, ubhetyebhetye ngakumbi kwiodolo encinci; -Umgangatho omncinci wokuvelisa ubukhulu yi-135mm * 135mm; -Uyilo olukhethekileyo lwebhodi ebanzi kunye nenkulu; Ulwakhiwo oluzinzileyo noluthembekileyo lwemveliso ngesixa esikhulu; -Zonke izinto ezinxulumene noko zivela kwi-suppl eyaziwayo ...
Indawo enye yokuLaminatin ...
Phawu * Sebenza nge-offset kunye ne-preri ...
Isici esinye sokujika isakhelo provi ...
Isantya esiphezulu emgceni weLami ...
Isantya esiphakamileyo seLaminator * Ubuninzi. lamina ...
Ikhasethi enye yoLuntu * Itroli yombane ...
Qhuba mqengqeleki swa
Akukho gama Inkcazo 1 Ubungakanani buxhomekeke kwicu ...
Phawu Udibaniso lokujikeleza co ...
Phawu Ukudityaniswa kwetyathanga leBhodi ...
Ukuhanjiswa kwephepha ngokuzenzekelayo ...
Inkqubo yoThutho lwePhepha i-Intelligen ...
Imodyuli yeZenzekelayo yeBelt Conve ...
Inkqubo yokuhambisa ngokuzenzekelayo inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ...
Inqwelo yokuhambisa, Ibhanki ye-Erp, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Ifolda yephepha le-A3,